इलाममा २० गते लगानी सम्मेलन : मेयर बस्नेत भन्छन्,‘समृद्धिको लागि हो लगानी सम्मेलन’
इलामः इलामको सदरमुकाममा रहेको इलाम नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गर्न कात्तिक २० गते मिति तोकेको थियो । तर, विभिन्न कारणवश लगानी सम्मेलन २ महिना पछि सरेर पुस २० गते हुने भएको छ । यो वर्षको असोजमा लगानी सम्मेलनको होमवर्क गरेको इलामले त्यसको ३ महिनापछि २० गते शुक्रबार लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
प्रदेश १ मै पहिलोपटक कुनै स्थानीय तहबाट हुन लागेको यो नै पहिलो लगानी सम्मेलन हो । सम्मेलनको अवधारणा मेयर महेश बस्नेतको टिमले गरेको हो । मेयर बस्नेतले सम्मेलनको अवधारणा, आवश्यकता र महत्वका विषयमा प्रदेश पोर्टलकर्मी विराट अनुपमसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सारः
लगानी सम्मेलन स्थानीय सरकारहरूमा प्रदेश १ मा मात्रै होइन सम्भवतः नेपालमै पहिलो हो । यस्को अवधारणा कसरी आयो ?
अहिले मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस चुलिएको छ । सबैले आर्थिक समृद्धिका कुराहरूमा ध्यान दिएको अवस्था छ । तर, आर्थिक समृद्धिको लागि आवश्यक लगानी, पूँजी र प्रविधि स्थानीय स्तरमा भएकोले नपुग्ने देखियो । त्यसैले लगानी सम्मेलनको अवधारणा हाम्रो टिममा आएको हो ।
लगानी, बजार र रोजगार सिर्जना गर्नलाई सम्मेलन गर्ने सोचेर छलफल चलाएका थियौँ । यही वर्षको असोजमा त हामीले तयारी समिति नै बनाएर काम गर्न थाल्यौँ ।
यो लागानी सम्मेलनमा कुन कुन स्वदेशी तथा विदेशी दाता र लगानीकर्ताहरू आउँदैछन् ?
लगानी सम्मेलन स्थानीय सरकारले आयोजना गर्न लागेको हो । स्थानीय सरकारको कानुनी सीमितताका कारण हामीले विदेशी दातृ निकायलाई सिधै बोलाउन मिल्दैन । यसको लागि हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यस पटक हामीले नेपाली लगानीकर्ताहरू, व्यापारिक घरानाहरू र व्यक्तिगत रूपमा उद्योगीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ ।
कुनकुन घराना तथा कस्ता उद्यमीहरूलाई निम्ता गर्नु भएको छ ? कोको आउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी राणादेखि व्यवसायीहरू चन्द्र ढकाल, चण्डी ढकाल हुँदै लगानीकर्ता विनोद चौधरीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । गोल्छा, खेतान र अन्य थुप्रै स्थापित नेपाली औद्योगिक घरानाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ । यसमा सबै आउनुहुन्न होला व्यस्तताको कारणले । तर, धेरै जनाको सहभागिता हुनेछ ।
लगानी सम्मेलन गर्नुअगाडि केके क्षेत्रमा लगानीको लागि आग्रह गर्न लाग्नुभएको छ ?
समृद्धिको लागि हो लगानी सम्मेलन । यसको लागि हामीले नीति नै बनाएका छौँ । पर्यटन, कृषि उद्योग, जडीबुटीको क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकता तोकेका छौँ । यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू इलाममा पछुताउनु पर्दैन ।
लगानी सम्मेलन त हुने भयो । लगानी गर्न चाहने वा गर्नेहरूलाई केके सहुलियतहरू दिँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले यसको लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सक्नेजति सबै कुरामा छुट दिने छौँ । उदाहरणको लागि घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने राजस्वमा छुट दिने, व्यवसाय करमा छुट दिने, जग्गा उपलब्धतामा छुट दिने, लगानी भएको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान दिनेछौँ । साथै, नीतिगत रूपमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हामीले गर्न सक्ने कामहरू हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।